First ... 50 90 98 99 100 101 Last
03-07-2012 10:57 PM #991
tifwmeuf2vkdif;udk aygif;NyD; wpfckwnf;aygif;csifwm.. load balancing router okH;&rvm;.. b,ftrsKd;tpm; aumif;vJ.. odcsifygw,f/
uolawmf ..... u*sD;ygudkar;Bunfhvdkuf olYqdkifrSm 2vdkif;wwfxm;wm .... a&mufwmcHNyD;awmhoHk;aewm
Dodo, galladino, GuruAM, Hollinaz, honelay86, justkidding, khit, ko too, ktg, LuckyMyanmar, mahawgani, mgknow, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, Ni Maung, Perigee, skyblue199, staraye, thudawzingyi, yankanar, yokesoe
03-08-2012 02:09 AM #992
Thanked 973 Times in 40 Posts
၂လိုင်းပေါင်းတဲ့နေရာမှာ တပ်ထားတဲ့လိုင်း၂လိုင်းတူမှ လိုင်းပေါင်းတာက အဆင်ပြေပါတယ်။
အဓိကက တစ်လိုင်းက ပရောက်ဆီပါပီး နောက်တစ်လိုင်းက ပရောက်ဆီမပါရင် ပေါင်းလို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါ။
ဥပမာ MPT ADSL + WiMAX
၂ ခုလုံး ပရောက်ဆီပါပေမယ့် ပရောက်ဆီ ၂ ခု မတူရင်လဲ ပေါင်းလို့ အဆင်မပြေပါ။
ဥပမာ MPT ADSL + MPT IPSTAR
၂ခုလုံး ပရောက်ဆီ မပါရင်တော့ အဆင်ပြေတာများပါတယ်။
ဥပမာ WiMAX + Bagan ADSL
Fiber + SKYNet
CDMA + Redlink
LB Router သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးပေါတဲ့ TPLink လေးတွေ သုံးပျော်ပါတယ်။ ၁ သိန်း ၀န်းကျင်ပေါ့။
မသုံးဘူးဆိုရင် Linux Server ထိုင်ပီး ပေါင်းလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးတဲ့အချိန်တိုင်း အဲဒီစက်ကို ဖွင့်ထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ကျွန်တော်သိသလောက်ပါ။ အမှားပါရင်လဲ ပါနိုင်ပါတယ်။
adaptor, akm, chithninnwai, deidei, Dodo, galladino, GuruAM, Hollinaz, honelay86, htinlinn, jackknife, jim beam, justkidding, Kaung Lay Luck, khit, ko too, ktg, lazyguylay, LU SHAY, mahawgani, mdychat, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, nayhtoo7211, Ni Maung, Peacock D. NgaPyae, Perigee, skyblue199, Thant Sin Htet, thudawzingyi, yankanar, yokesoe, zero6
03-10-2012 03:12 PM #993
ကျွန်တော်ဆိုင်မှာ သုံးတာက SkyNet ပါ.. Gtalk ကခဏ ခဏ offline ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ ... ကြားဖူးတာက Server တခုကြားခံသုံးရင် connection မပြတ်တော့သလိုဖြစ်တယ် ကြားမိလို့.. Linux server ဆိုလား... အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲသိချင်လို့ပါ...
Dodo, galladino, GuruAM, honelay86, justkidding, khit, ktg, mahawgani, myanmargunner, Ni Maung, yankanar, yokesoe
03-10-2012 06:31 PM #994
Originally Posted by aungxing
uRefawmfvnf;pudkif;ysuf tJav pudkif;eufoHk;wmygyJ /
a&mh'gav;eJoHk;MunfhAsm /*sDawmhtwGufyg/ 212.57.162.8 port - 80
prf;Munfhaygh .. &&ifvnf;tjrwfaygh uRefawmfawmh&aewmyJ
adaptor, Dodo, galladino, GuruAM, honelay86, JoeJoule, justkidding, Kaung Lay Luck, khit, little caesar, mahawgani, myanmargunner, parkye, talltar, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zero6
03-11-2012 02:03 AM #995
Trendned okH;ygvm;oluykdaumif;NyD;?ndrfygw,f TPLink xufawmhaps;BuD;ygw,f 2odef;avmufawmh&Sdr,f
adaptor, Dodo, galladino, GuruAM, honelay86, justkidding, Kaung Lay Luck, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, Ni Maung, talltar, thudawzingyi, yankanar, yellowcolor, yokesoe
03-12-2012 04:58 AM #996
Thanked 332 Times in 24 Posts
ရတနာပုံကတော့ ဒီလို ပြောထားတယ်
ဒီနေ့ မနက်မှာ အင်တာနက်ဆိုဒ်တွေဖွင့်လိုက်တိုင်း ဒါကြီး တက်လာတယ်ဗျ...
adaptor, galladino, honelay86, htinlinn, JoeJoule, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, nijinsky, Oscar Htun, skyblue199, staraye, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zero6
03-12-2012 11:25 PM #997
Fortune International ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်လှိုင်း စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေး
FTTH (Fiber to the home ) ခေါ်သော ဖိုက်ဘာကေဘယ် တစ်ချောင်းတည်းဖြင့်
တယ်လီဖုန်းမြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်နှင့် ရုပ်သံလှိုင်းတို့ ပါဝင်သော
ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို dk For-tune Interantional ကုမ္ပဏီက
ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးအတွက် စတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစနစ်သည် G-Pon(Gigabit Passive Optical Network ) နည်းပညာကို
အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
FTTH စနစ်တွင် ပါဝင်သည့် VOIP စနစ်သည် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး
ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ အလွယ်တကူ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း၊ ရုပ်သံလိုင်းတွင်
IPTV စနစ်ပါရှိသဖြင့် အခမဲ့ရုပ်သံ(၃) လိုင်းနှင့် အခပေးရုပ်သံ (၁၇)
လိုင်း စုစုပေါင်း ရုပ်သံလိုင်း (၂၀) ပါဝင်ပြီး အင်တာနက်စနစ်မှာလည်း
လက်ရှိအင်တာနက် စနစ်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကာ
ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ပါဝါ သုံးစွဲမှုများစွာ သက်သာခြင်း
စသည့် အားသာချက်များရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းစနစ်ကို အသုံးပြုလိုပါက
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက
ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုပါက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မိတ္တူ၊
ပုံစံ (၉) နှင့် ပုံစံ (၂၆) မိတ္တူတို့ပြင် ကုမ္ပဏီမိတ္တူလည်း လိုအပ်ကြောင်း
ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် ကနဦး တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးအတွက်
ကုန်ကျစရိတ်များမှာ ၅၁၂ KPS (ဖုန်း+အင်တာနက်) ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ်
(၇၅၀၀၀၀)၊ နှစ်စဉ်ကြေးကျပ် (၆၀၀၀၀)၊ (ဖုန်း+အင်တာနက်+ရုပ်/သံ)
ကနဦးတပ်ဆင်က ကျပ် (၉၀၀၀၀၀)၊ နှစ်စဉ်ကြေးကျပ် (၈၄၀၀၀၀)၊
(အင်တာနက်သီးသန့်) လစဉ်ကြေး ကျပ် (၄၅၀၀၀) ဖြစ်ပြီး၊ 1Mbps
(ဖုန်း+အင်တာနက်) ကနဦးတပ်ဆင်ခမှာ ကျပ် (၇၅၀၀၀၀)၊ နှစ်စဉ်ကြေးကျပ်
(၆၀၀၀၀)၊ (ဖုန်း+အင်တာနက်+ရုပ်/သံ) ကနဦး တပ်ဆင်ခကျပ် (၉၀၀၀၀၀)
နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ်(၈၄၀၀၀၀)၊ (အင်တာနက်သီးသန့်) လစဉ်ကြေး ကျပ် (၇၅၀၀၀)
ဖြစ်သည်။ 2Mbps (ဖုန်း+အင်တာနက်) ကနဦးတပ်ဆင်ခမှာ ကျပ် (၇၅၀၀၀၀)၊
နှစ်စဉ်ကြေးကျပ် (၆၀၀၀၀)၊ (ဖုန်း+အင်တာနက်+ ရုပ်/သံ) ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ်
(၉၀၀၀၀၀) နှစ်စဉ်ကြေး ကျပ် (၈၄၀၀၀၀)၊ (အင်တာနက်သီးသန့်) လစဉ်ကြေး ကျပ်
(၁၂၅၀၀၀)တို့ဖြစ်သည်။ 4Mbps (ဖုန်း+အင်တာနက်) ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ် (၇၅၀၀၀၀)
နှစ်စဉ်ကြေးကျပ် (၆၀၀၀၀)၊ (ဖုန်း+အင်းတာနက်+ရုပ်/သံ) ကနဦးတပ်ဆင်ခ ကျပ်
(၂၇၅၀၀၀) အသီးသီး ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း Fortune International ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့်
မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်လှိုင်းစနစ်ကို ယခုလတ်တလောတွင်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ အလုံ၊ ဒဂုံ၊
စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်နှင့် ဗဟန်းမြို့နယ်များ၌
တပ်ဆင်ပေးလျက်ရှိပြီး တာမွေ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရန်ကင်းနှင့်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်များသို့ လာမည့် ဇွန်လအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်ရှိသည့် မြို့နယ်များသို့
ဝန်ဆောင်မှု ဆက်လက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ahteekyan, blackcat13, complicatedcool, Deadmanwalking, Dodo, galladino, GuruAM, honelay86, jackknife, JoeJoule, justkidding, Ko Khant, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, Ni Maung, Oscar Htun, Peach, phyo2006, skyblue199, skyer, staraye, THARGYII, yankanar, yellowcolor, yokesoe, Zarmane, zero6
03-17-2012 03:50 PM #998
usrtck&efukefa&mufwkef; CDMA 800HMZ eJJH.internet okH;junf.awm. oHk;wJ.tcsdefukdaocsmrSwfxm;jyD; 1rdepf4usyfeJ.wGufjunf.w,f jyD;&if balance check vkyf &if MPT ujzwf,loGm;wmutjrJrsm;aeygw,f /( 50usyfuae 500 usyftxduGmygw,f)
data roaming vJydwfxm;ygw,f..
wcgwav rdepfenf;enf;yJoHk;rS usr wGuf wm eJ. MPT wGuf wmeJ.wlw,f/
tjcm; oHk;wJ.olawGa&m tJ'Dvdkjzpfrjzpfodcsifygw,f/
Last edited by pearlcrystal; 03-17-2012 at 03:58 PM.
adaptor, galladino, GuruAM, GwanSein, honelay86, JoeJoule, justkidding, Ko Khant, ko too, KoKoNaung, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, Ni Maung, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zero6
03-17-2012 06:21 PM #999
tckavmavmq,f uRefawmfhqDrSm a'gif;vk'f pyd'f awmfawmfav; aES;aeygw,f/ tyfvk'fvnf; vkyfvdkYr&bl;/ surfing uawmh tqifajyaeao;w,f/ bmjzpfovJawmh rajymwwfbl;/ t&ifu 'Dtcsdefqdk a'gif;vk'fvkyfvdkY awmfawmftqifajywJhtcsdefyg/ a'gif;vk'fpyd'fudk pu&ifa&SmYzrf;xm;wmudk tifharh*sf[dkYpfwif;rSm wifaewmvnf; rwufbl;/
adaptor, akm, galladino, gypsydoll, Hollinaz, honelay86, icy, JoeJoule, justkidding, Ko Khant, ko too, ktg, little caesar, Ma Thapyay, mahawgani, mgmgthan, MNO.BN, myanmargunner, Ni Maung, painpainlay, PiNyat, skyblue199, yankanar, yellowcolor, yokesoe, zero6
03-18-2012 02:53 AM #1000
udk*k&ka& .... [dkaeYu pudkif;eufrSmvmoGm;w,f b,fem;eJYb,fem;qufwJh zdkifbmaub,fvdkif;qdkvm; ([dk pDrD0D MuD;xifwmyJ) csdKY,Gif;vdkY vuf&Sdxuf bef;0pfyrmP 3.1Gb avQmhusaew,fwJhcifAs .... jyifqifaeygw,fwJh ... vmr,fMumr,fayghAsm
adaptor, akm, BH, gypsydoll, Hollinaz, icy, JoeJoule, justkidding, Kaung Lay Luck, ko too, ktg, little caesar, mahawgani, MNO.BN, myanmargunner, painpainlay, skyblue199, yankanar, yellowcolor